झापामा प्रहरीकै आँखा अगाडीबाट गोरु तस्करी ! – Anusandhan Online
मुख्य पृष्ठ /News/झापामा प्रहरीकै आँखा अगाडीबाट गोरु तस्करी !
त्यस क्षेत्रमा रहेका फयाज,अजाज नाम गरेका नाम चलेकै चौपाय तस्करी गर्ने मूख्य भूमिका खेल्ने गरेका छन । तर,उनीहरुको अवैध कृयाकलाप रोक्न प्रहरी खासै चासो देखाएको पाइदैन् ।
कहीँले मध्यरातमा त कहीँले दिउँसै भारतर्फ गोरु भित्र्याइन्छ । तर,नियमक निकाय मौन रहदा तस्करहरुले फाइदा लिइरहेका छन । त्यसो त भारत प्रवेश गरुन् जेल सम्म सशस्त्र प्रहरीको बिओपी पनि रहेको छ । घेराबारी,भागडुब्बा हुँदै भारत तर्फ यसरी गोरु तस्करी हुँदा उनीहरु समेत रमिते बन्ने गरेका छन ।
राजेश हमाल सहित दजनाै कलाकार झापा आइपुगे ,केही बेरमा सप्तरंग सुरु हुदै